June | 2010 | သက်ဆုံးနှင်း
ဘယ်လိုပျော်သလဲ June 28, 2010
Filed under: ရေးမိရေးရာ စာတိုပေစ — thetsonehnin @ 10:28 AM
Practical အခန်းသည် ထင်ထားသည်ထက်ပိုပြီး တိတ်ဆိတ်နေပါသည်။ နောက်ဆုံးအသုတ်မို့ထင်ပါသည်။ ရှေ့လူတွေရှိတုန်းက ဟိုဟိုဒီဒီမှ အသံလေးတွေ ခပ်အုပ်အုပ်ကြားရသည်။ မကြောက်ဘူးလို့ စိတ်တင်းထားရင်းနှင့် နှုတ်ဖြေ (Viva) မေးမည့် အမရှေ့တွင် မတ်တပ်ရပ်လိုက်မိသည်။ ဆေးဝါးဘက်ဆိုင်ရာ ဓါတုဗေဒဌာနမှ အမ သည် လူကောင် သေးသေး၊ မျက်မှန်လေးနှင့် အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းသည်။ ကျောင်းသူများကိုလည်း အလိုလိုက်သည်။ စာအသင်အပြကောင်းပြီး စိတ်ထား အရမ်းကောင်းသည့် အမရှေ့တွင် နှုတ်ဖြေဖြေရန်ကြောက်နေရသည့် ကျွန်မတွင် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပဲရှိသည်။
ကျွန်မကျောင်းမတက်ခဲ့ပါ။ Practical အတွက်စာရှင်းပြသောနေ့က ကျွန်မကျောင်းပြေးခဲ့သည်။ ဘာကြောင့် အတန်းမတက်ရသလဲဆိုရင် စိတ်ညစ်လို့မတက်တာဆိုသည့် အဖြေကလွဲပြီး တခြားဘာမှ မရှိနိုင်။ ဘာကြောင့် စိတ်ညစ် ရသလဲဆိုရင်တော့ အဖြေက အဆင်သင့်ရှိနေသည်။ “ဆရာဝန်မဖြစ်ခဲ့၍စိတ်ညစ်ပါသည်။ ကျွန်မသိပ်ဖြစ်ချင်ခဲ့သော ကလေး အထူးကုဆရာဝန် တစ်ယောက် မဖြစ်ခဲ့၍အရာရာကို စိတ်ကုန်နေပါသည်”။ ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ဆိုသော ဦးတည်ချက်ကလွဲပြီး တခြားဘာကိုမှ မျှော်လင့်မထားသော ကျွန်မသည် ဆရာဝန်မဖြစ်မှ ဘာမှအသုံးမကျတော့ဟု မိမိကိုယ်မိမိ ထင်နေသည်။ ဆရာဝန်မျက်နှာသာ တစ်ကမ္ဘာ ဟု ထင်မှတ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင် “ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်”တက်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း အတက်သာရှိသည်။ ခေါင်းထဲတွင် ဗလာ၊ ခံယူချက်က နတ္ထိ၊ စာတွေက တစ်ဘက်နားကဝင်ပြီး တစ်ဘက်နားက ထွက်သွားဖို့ မပြောနှင့်၊ ဝင်လာသော နားစည်ကို ရိုက်ပြီး ပြန်ထွက်သွားသည်။ နောက်ဆုံးကျောင်းမတက်ဘဲ အိမ်မှာ ခွေအိပ်နေရတာ ကိုသာ သဘောကျနှစ်ခြိုက်ခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ရည်မှန်းချက်တိတိကျကျမရှိသည့် ကျွန်မသည် အမရှေ့တွင် ကြောက်ရွှံ့နေခြင်းသည် စာမေးပွဲရှုံးမှာကို ကြောက်နေခြင်းမဟုတ်။ အမဆူမှာကို ကြောက်နေခြင်းမဟုတ်။ အမကို အားနာနေခြင်းသာဖြစ်သည်။ သူကောင်းကောင်း မွန်မွန် သင်ထားပါလျက် ကျွန်မကသာ ပေါက်တတ်ကရဖြေခဲ့လျှင် အမစိတ်ပျက်သွားမှာကို ကြောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အရင်အခေါက်တွေ ဖြေတုန်းကတော့ အုပ်စုလိုက်ဖြေခဲ့၍သိပ်မသိသာခဲ့။ မရှက်တမ်းဝန်ခံရမည်ဆိုလျှင် “ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်” ရောက်မှ ကြောက်တယ်ဆိုသော စကားလုံးကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရင်ဆိုင်ဖူးခြင်းဖြစ်သည်။ (အရင်က စာမေးပွဲအောင်၊ မအောင်ကို တစ်ခါမျှမတွေးခဲ့ဘူးပါ။) သည်လိုနှင့် အမက စာစမေးပါသည်။
ကျွန်မမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းပါပဲ။ အမမေးသည့် ဓါတုပစ္စည်းတွေ Chemicals၊ ဓါတ်ပြုမှုတွေ Reaction ကို ကျွန်မမသိပါ။ အမှတ်ပေးချင်လွန်းသည့် အမသည် မေးခွန်းလေးတွေကို စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်လိုက်မေးပေးပါသည်။ နောက်ဆုံး အလွယ်ကူဆုံး မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါသည်။ “အက်စပရင်ဟာ ဘယ်မှာ ပျော်သလဲ”တဲ့။ ထိုမေးခွန်းကို ပြန်ဖြေမည့် အချိန်တွင် ပျော်သည်၊ ပျော်ဝင်သည်ဆိုသော စကားလုံးကို ရုတ်တရက်မသိတော့ပါ။ ဒါကိုသိသောအမက လမ်းကြောင်းပေး ပါသည်။ “ညီမလေး၊ ပျော်တာလေ၊ ဘယ်လိုခေါ်သလဲ”လို့မေးတော့ ကျွန်မပါးစပ်ကနေ “Happy” လို့ ယောင်ပြီးထွက်သွား ပါသည်။ မယုံနိုင်ခြင်း၊ အံ့ဩခြင်း၊ ယူကျုံးမရဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် အမ၏ မျက်လုံးလေးများပို၍ဝိုင်းစက်သွားခဲ့သည်ဟု ကျွန်မထင်ပါသည်။ ကျောင်းသူများကို ချစ်သောအမသည် ကြံဖန်ပြီး အမှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ “Happy လည်း ပျော်တာပဲ။ Dissolve လည်း ပျော်တာပဲ၊ ပျော်တာခြင်းတော့ အတူတူပါပဲလေ”တဲ့။
ထိုအချိန်တွင် အမကို အရမ်းအားနာသွားခဲ့သည်။ ရှက်လည်း ရှက်မိသည်။ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်လည် ဆန်းစစ်မိခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ပထမဆုံးခြေလှမ်း လှမ်းစေသည့် တွန်းအား လည်း ဖြစ်သွားသည်။ အခြေခံစာတွေကို လွတ်ခဲ့သည့်အတွက် နားမလည်သည့် အပိုင်းတွေရှိနေသော်လည်း နောက်ပိုင်း သင်ရင်း နှင့်စိတ်ပါလာသည်။ မိမိကျောင်း၏ ဘာသာရပ်များကို နားလည်လာသည်။ တန်ဖိုးထားတတ်လာသည်။ သည်လိုနှင့် တက္ကသိုလ်တက်စဉ်တစ်လျှောက်လုံး တန်ဖိုးရှိသောအချိန်များကို ပျော်ရွှင်စွာနှင့် ဖြတ်သန်းခဲ့သည်။ ထိုအချိန်အထိ ဘဝသည် ပျော်စရာချည်းသာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
“ကျောင်းပြီး၍အလုပ်ခွင်ထဲရောက်လာချိန်မှာရော…ပျော်သေးရဲ့လား”ဟု တစ်စုံတစ်ယောက်က မေးခဲ့သည်ရှိ သော် “ဟုတ်ကဲ့၊ ပျော်ပါသည်” ဟုသာ ပြန်ဖြေဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ထိုပျော်သည်ဆိုသောစကားလုံးသည် “Happy” မဟုတ်၊ “Dissolve” ပျော်ဝင်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုရသော် လက်ရှိအလုပ်ထဲတွင် ကျွန်မ ခေါက်ရိုးကျိုး နေပါပြီ။ ဆေးကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အလုပ်ဝင်ပြီးခဲ့သည့်နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်မတို့သည် ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ် ပျော်ရွှင်အောင် ထိန်းကျောင်းပေးတတ်ခဲ့သည်။ မနက်ပိုင်း ရုံးကိုဝင်၊ အထက်လူကြီးတွေပြောသမျှ နားထောင်၊ ချပေး သမျှ Plans များကို လက်ခံရင်း အပြင်ဘက် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများတွင် ဆရာဝန်သွားတွေ့ရန် အစီအစဉ်ဆွဲထားရသည်။ အရောင်းတက်ရန် ဆိုသော စကားလုံးကို မကြားချင်မှအဆုံးပင်။
အလုပ်ဝင်ခါစက ရွယ်တူဆရာဝန်တွေကိုမြင်လျှင် ငုပ်လျှိုးနေသော အတိတ်၏ ဒါဏ်ရာက ပြန်ပေါ်လာသည်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ကိုသွားရင်း House ဆင်းနေသော ရွယ်တူဆရာဝန်များကို မြင်လျှင် ဝမ်းနည်းနေမိသည်။ ဆေးခန်းကြီးများတွင် ဆရာဝန်ကြီးများကိုစောင့်ရင်း သူတို့နောက်မှ ဘွဲ့တသီတတန်းကြီးကို အားကျလေးစားနေမိသည်။ ကလေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများ၏ ရသမြောက်သောစာပေကို ဖတ်ရင်းမျက်ရည်ဝိုင်းနေမိသည်။ သို့သော် ကြာကြာဝမ်းနည်းမနေနိုင်၊ လက်ရှိအလုပ်ရဲ့ သွေးဆောင်ရာကို ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသည်။ လက်ရှိအလုပ်ထဲတွင် ပျော်နိုင်အောင် ကြိုးစားရသည်။ ပျော်ချင်ယောင်ဆောင်သည်ဆိုသော စကားလုံးကို ကောင်းစွာ သရုပ်ဖော်တတ်ခဲ့ပါသည်။
အလုပ်ထဲတွင် ပျော်အောင် ဖန်တီးရင်း၊ ကြိုးစားရင်းနှင့် ဆေးအရောင်းတက်ရင်ပေးသော Incentive ဆိုတာကြီး တွင် ပျော်ဝင်လာသည်။ Bonus ဆိုသော ရလဒ်တို့တွင် ပျော်ဝင်လာသည်။ ထိုအတွက် သာမန်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကနေ Team Leader ၊ ထိုမှသည် Supervisor ၊ အဲဒီကနေ Manager တဆင့်ထက်တဆင့် မြင့်သည်ထက်မြင့်အောင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ သည်။ မိမိအလုပ်လုပ်သော ဧရိယာတွင် သူများလက်ညှိုးထိုးစရာမလိုအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအတွက် ရလာသော အကျိုးအမြတ် ထဲတွင် ပျော်ဝင်နေမိသည်။ စက်ရုပ်တစ်ခုကို သံပတ်ပေးထားသလို “အလုပ်ပြီးရင် အလုပ်၊ အလုပ်နှင့် ရပိုင်ခွင့်”။ ထိုခေါင်းစဉ်များ အောက်တွင် ချာလပတ်ရမ်းနေသည်။ ကျောင်းသူဘဝကလို စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ပျော်နိုင်သေး သလား ဆိုပြီး မိမိကိုယ်ကို ပြန်သုံးသပ်မိတော့ အရမ်းအံ့ဩသွားခဲ့သည်။ အရင်တုန်းက အပျော်တမ်းရိုက်ထားသော ဓါတ်ပုံများကိုကြည့်ရင်း ငါမှ ဟုတ်ရဲ့လား ဆိုပြီး သံသယတွေ ဝင်လာမိသည်။
တခါတလေတော့ ကျွန်မစဉ်းစားမိသည်။ ကျွန်မဝဋ်လည်နေတာ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျောင်းသူဘဝတုန်းက ဆိုးခဲ့တာ တွေကို ဆရာမများက ခွင့်လွှတ်ခဲ့သော်လည်း ဝဋ်ကတော့ ထပ်ကြပ်မခွာ လိုက်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ပျော်ဝင်တာ Dissolve နှင့် ပျော်တာ Happy ဆိုသော စကားနှစ်လုံး၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ကွဲကွဲပြားပြားသိရအောင် သဘာဝတရားကြီးက သင်ကြားပေးနေတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်မစိတ်ထင်ပြောရလျှင် ကျွန်မနည်းတူ မိမိ၏အလုပ်၊ ဂုဏ်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများထဲတွင် ပျော်ဝင်နေသူ အတော်များပါလိမ့်မည်။ ဒါတွေကို တကယ့်ပျော်ရွှင်မှုလို့ထင်မှတ်ရင်း၊ ရုန်းကန်ရင်း၊ အဆင်ပြေချင်ယောင် ဆောင်နေရသော ဘဝတွေ လူတိုင်းနီးပါးမှာ ရှိပါလိမ့်မည်။
လွန်ခဲ့သော တစ်လခန့်က မြို့ထဲကိုသွားရင်း တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူးဆရာမကြီး တစ်ယောက်နှင့် တွေ့ခိုက် စကားတွေ အများကြီး ပြောဖြစ်သည်။ ဆုံးမစကားတွေလည်း ပါသည်။ လမ်းညွှန်တာ၊ သတိပေးတာတွေပါသည်။ အငယ်တွေကို လက်တွဲခေါ်ဖို့ အကြောင်းတွေလည်း ပါသည်။ အလုပ်ထဲမှာရော..တကယ် အဆင်ပြေရဲ့လားလို့ ဆရာမကြီး ကမေးတော့ ကျွန်မခေါင်းငြိမ့်ပြခဲ့မိသည် ထင်ပါသည်။ Senior Pharmacist တစ်ယောက်ဖြစ်နေသည့် အတွက်ရယ်၊ ဆေးဝါးကျောင်းမှ ဆင်းတဲ့သူတွေ ဒီလိုမျိုးတွေကို လုပ်နိုင်သည်ဆိုတာကို အငယ်တန်းက မောင်၊ ညီမလေးများ သိနိုင်ဖို့အတွက်ရယ်၊ ကျွန်မရဲ့ မိသားစုစီးပွားရေး အခြေအနေ၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဝင်ဆံ့နိုင်ဖို့အတွက်ရယ် …..စသည့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေကြောင့် ကျွန်မဘဝ ဆက်ပြီး ပျော်နေရပါဦးမည်။ ဘယ်လောက်အထိပျော်မလဲ၊ ဘယ်အချိန်အထိလဲ ဆိုတာကို…..ပြောပြဖို့တော့ တော်တော်ခက် ပါလိမ့်မည်။
ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)မှ ဆရာ၊ ဆရာမများအား ဦးခိုက်လျက်
Filed under: ရေးမိရေးရာ စာတိုပေစ — thetsonehnin @ 10:27 AM
ကျွန်မ အချစ်ဆုံးအမျိုးသားတစ်ယောက်ကို ပြောပါဆိုရင် ကျွန်မ ဦးငယ်လို့ပဲ ကျွန်မပြောပါလိမ့်မည်။ ဦးငယ်ဆိုတာက အမေရဲ့မောင်အငယ်ဆုံး။ ကျွန်မဘ၀ သိတတ်စကတည်းက ဦးငယ်နဲ့ပဲ အနေများခဲ့တယ်။ အရေးအခင်းကာလတွေတုန်းက အမေနဲ့ အဖေဟာ တခြားရွာလေးတွေကို လှေတစင်းနဲ့ ကုန်လဲဖို့ထွက်သွားရင် ၂ နှစ်သမီး ကျွန်မဟာ ဦးငယ်နဲ့ ကျန်ခဲ့ရသတဲ့။ ကလေးပေါက်စလေးကို သနပ်ခါးဖွေးဖွေးလေးတွေ အမြဲလိမ်းထားပေးသတဲ့။ အဲဒီငယ်ငယ်တုန်းက အဖြစ်တွေကို ကျွန်မမသိပေမယ့် သိတတ်တဲ့အရွယ်တည်းက ကျွန်မကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေအောင်၊ စည်းစနစ်ကျအောင် ပြပေးခဲ့တာလည်း ဦးငယ်ပါပဲ။ ကျွန်မငယ်ငယ်က အပြစ်တစ်ခုခု လုပ်မိလို့ အဖေက ရိုက်ရင် ဦးငယ်ကအနားမှာ မနေတော့ပါဘူး။ သူ့ထက်အသက်ကြီးတဲ့ ကျွန်မရဲ့ အဖေကို စိတ်ဆိုးပြီး ကျွန်မတို့ အိမ်ကိုဦးငယ်မလာတော့ပါဘူး။ ကျွန်မကို အရမ်းချစ်တဲ့ ဦးငယ်ဟာ သူစာကျက်တဲ့အချိန်မှာတောင် ကျွန်မကို သူ့ပေါင်ပေါ်တင်ပြီး စာကျက်ပါတယ်။ ကျွန်မ ၆ တန်းလောက်ရောက်တဲ့အထိလည်း ဦးငယ်ရဲ့ ပေါင်ပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး စာကျက်ခဲ့တာပါပဲ။
ကျွန်မ ၈တန်းနှစ်တက်တော့ ဦးငယ်ရဲ့ စာကြည့်စားပွဲကို သွားဖွရင်းနဲ့ အပြာရောင်စာအိတ်လေးတစ်လုံးကို တွေ့ပါတယ်။ ဖောက်ထားတဲ့ စာအိတ်လေးရဲ့ ထောင့်စွန်းကနေ စာရွက်လေးတစ်စထွက်နေတာနဲ့ ကျွန်မလည်း ထုတ်ပြီးဖတ်ကြည့်မိပါတယ်။
စာရွက်လေးရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာက “ကိုကြီး”တဲ့။ တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ …..ဦးငယ်များ ရည်းစားထားနေသလား။ ဟင့်အင်း…. မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ဦးငယ်က ငါကလွဲရင်ဘယ်သူ့ကိုမှ ချစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲလိုစိတ်တင်းထားပေမယ့် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ
ကျွန်မသိနေတယ်လေ။ တုန်တုန်ရီရီနဲ့ စာကိုဆက်ဖတ် လိုက်ပါတယ်။ စာရဲ့အောက်ဆုံးမှာက မိုးတဲ့။ ပြီးတော့ ပို့စကဒ်လှလှလေးတွေ၊ အားလုံးဟာ မိုးရွာနေတဲ့ ပုံပါတဲ့ ကဒ်လေးတွေပါပဲ။ မိုးရွာနေတဲ့ ကဒ်လေးတွေကို ကြည့်ရင်းနဲ့ ကျွန်မငိုနေမိတယ်။ အဲဒီနေ့က တနေ့လုံးငိုနေတယ်။ နောက်ပိုင်းလည်း သတိရတိုင်းထငိုမိတယ်။ အို….ကျွန်မနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ အထိတောင် ငိုနေမိတယ်။ နေပြန်ကောင်းလာတော့ ကျွန်မစိတ်ထားပြောင်းလာပြီ။ ၀မ်းနည်းပြီး ငိုစရာမလိုဘူး၊ ငါ့ဦးငယ် ငါတို့ပဲပိုင်တယ်။ ဒီတော့ မိုးနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်ကိုပြတ်ရမယ်။
အဲဒီအချိန်ကနေစပြီး ကျွန်မနဲ့ ဦးငယ်ရဲ့ကြားမှာ သွေးအေးစစ်ပွဲတွေ အကြိမ်ကြိမ်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ မိုးနဲ့ပတ်သက်လာရင် စစ်တလင်း ကိုအမြဲခင်းထားပြီး စစ်ကြော်ငြာခဲ့သူဟာ ကျွန်မပါပဲ။ မိုးရဲ့ ပုံစံကို ကျွန်မမသိဘူး။ သူမ ဖြူသလား၊ ညိုသလား၊ စိတ်နေစိတ်ထား ဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာ ကျွန်မ မသိဘူး။ ကျွန်မသိတာက ကျွန်မရင်ဘက်ထဲကနေ ကျွန်မရဲ့ ဦးငယ်ကို တချိန်ချိန်မှာ ဆွဲထုတ်သွား
မယ့်သူ။ ဒါကြောင့် မိုးကို ကျွန်မလုံးဝအလိုမရှိ။ဦးငယ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဖွလို့ မိုးလို့ အဓိပါယ်သက်ရောက်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုတွေ့ရင် ဥပမာ-မိုးရွာနေတဲ့ ပို့စကဒ်လေးတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ဦးငယ်က မိုးဆိုတဲ့ စကားလုံးပါတဲ့သီချင်းဆိုနေရင်၊ အဲဒီနေ့ဟာ ကျွန်မ သောင်းကျန်းတဲ့နေ့ပါပဲ။ ကျွန်မဆယ်တန်း ဖြေခါနီးအထိ မိုးနဲ့ ဆက်သွယ်နေတုန်းပဲကို သိတော့ ကျွန်မဦးငယ်ကို စိမ်ခေါ်ခဲ့သေး တယ်။ “မိုးကို မဖြတ်ရင် ကျွန်တော် လုံးဝ စာမေးပွဲမဖြေဘူး” လို့ ခေါင်းမာမာနဲ့ ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အတွက် (တကယ်ပြတ်တာ မပြတ်တာ အသာထား၊) ကျွန်မရှေ့မှာတင် လမ်းခွဲတဲ့စာကို ရေးပြီး မိုးဆီကို ပို့ခဲ့ရပါသေးတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်မလက်ခံခဲ့တာက အချစ်ဆိုတာ မိသားစုကနေ ကင်းကွာ သွားအောင် ဆွဲထုတ်သွားမယ့် အရာရယ်လိုပေါ့။
တစ်ခါတစ်ခါငြိမ်သွားလိုက်၊ သိတဲ့အခါ ပြန်ပြီး ပူညံပူညံလုပ်လိုက်ပေမယ့် ကျွန်မနဲ့ ဦးငယ်ကြားက ဆက်ဆံရေးဟာ အရင်အတိုင်းပဲ။ ကျွန်မရဲ့ဦးငယ်ဟာ ကျွန်မကို အလိုလိုက်ဆဲပါပဲ။ ရန်ကုန်ကနေ ကျောင်းပိတ်လို့ အိမ်ပြန်ရင် ဦးငယ်က လာကြိုမြဲ။ ကျွန်မအိမ်မှာ ၁၀ ရက် လောက်နားခွင့်ရရင် ဦးငယ်နားမှာ ကပ်နေတာက ၇ ရက်လောက်၇ှိပါလိမ့်မယ်။ အိမ်နဲ့ ၁၀ မိနစ်လောက်ပဲဝေးတဲ့ ဈေးကို သွားတာကအစ ဦးငယ်လိုက်ပို့မှပဲ သွားပါတယ်။ သင်္ကြန်ပြန်ရင်လည်း ဦးငယ်ရဲ့ ဆိုင်ကယ်နောက်ကနေပဲ လျှောက်လိုက် နေမိပါတယ်။ အဲဒီလောက်အထိ ကျွန်မချစ်တဲ့ ဦးငယ်ဟာ တခြားသူတစ်ယောက် အနားမှာ သွားနေမှာကို ကျွန်မစိတ်ကူးထဲမှာ တောင်ထည့်လို့မရပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ချစ်သူနဲ့ တူမအကြားမှာ အဆင်ပြေမှုရအောင် ကြိုးစားချင်တဲ့ ဦးငယ်ရဲ့ ခံစားချက်ကို ပက်ပက် စက်စက် ကြီးကို လျစ်လျူရှုခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို ကျွန်မရဲ့ ဇွတ်တရွတ်နိုင်တဲ့ မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ သဘောတရားကြားမှာ ပြောင်းလဲလာခဲ့တာက ဦးငယ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးပါ။ ကိုယ်ဝန်လမစေ့ဘဲမွေးခဲ့ရတဲ့ဦးငယ်ဟာ နှလုံးတစ်ခြမ်းကြီးနေပြီး ကျောက်ကပ်တွေပျက်စီးနေတာကိုသိတဲ့အချိန်မှာ အချိန်ဟာ အတော်ကို နှောင်းခဲ့ပါပြီ။ ကျောက်ကပ်အကြိမ်ကြိမ်ဆေးတာတောင် သွေးတိုးကို ဘယ်လိုမှ မထိန်းချုပ်နိုင်တော့တဲ့ ဦးငယ်ဟာ အသက်ငယ်ငယ် လေးနဲ့ သူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေ အားလုံးကို ခွဲခွါခဲ့ပါတယ်။ ဦးငယ်ကို ဂူသွင်းတဲ့အချိန်မှာ လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ မိုးကို ကျွန်မ မတွေ့လိုက်ခဲ့ပေမယ့် ဦးငယ်အသည်းအသန်နေမကောင်းဖြစ်နေတုန်းက သတင်းလာမမေးခဲ့ တဲ့အတွက် ကျွန်မစိတ်ဆိုးမိ ပါသေးတယ်။ (ဒီလောက်ဆိုးသွမ်းနေတဲ့ ကျွန်မရှိနေတဲ့ အချိန်ဘယ်လာမေးမလဲနော်)။ အမှန်တော့ ကျွန်မမိုးကို မုန်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ဦးငယ်ကိုသာ မျှဝေမပေးချင်တာပါ။
နောက်ထပ် ၁ နှစ်ခွဲလောက်အကြာမှာ မိုးရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာကိုရတဲ့ အချိန်ကျွန်မမဆီမဆိုင်ငိုခဲ့မိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ငိုမိတယ် ဆိုတာကိုလည်း အခုထိ မသိသေးဘူး။ “ငါဖျက်တုန်းကတော့ သဲသဲလှုပ်ချစ်ခဲ့ကြပြီး ငါ့ဦးငယ်သေလို့ ဘယ်လောက်မှ တောင်မကြာသေးဘူး။ သူကတော့ မင်္ဂလာဆောင်ပြီ။ လတ်စသတ်တော့ အချစ်ဆိုတာ တစ်ယောက်မရှိလည်း တခြား တစ်ယောက်နဲ့ အစားထိုးလို့ ရတာပဲလို့ ” စဉ်းစားမိပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ အချစ်ဆိုတာကို မုန်းတယ်။ အဲဒီအချိန် ကျတော့ အချစ်ဆိုတာကို အယုံအကြည်မဲ့ခဲ့တယ်။ အချစ်ဆိုတာ နင်နေ၊ ငါသွားဆိုတဲ့ ဟိတ်ဟန်ကြီးသမား ဆိုတဲ့ စာသားကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံခဲ့တာပေါ့။
ဒါနဲ့ပဲ မိုးနဲ့ ကျွန်မတို့မိသားစု ပတ်သက်မှုဇာတ်လမ်း တခန်းရပ်ပြီလို့ အောက်မေ့ခဲ့ကြတာပေါ့။ ကျောင်းပြီးသွားတော့ ကျွန်မလည်း ရန်ကုန်မှာ ကိုယ်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ရင်းနဲ့ အမေ့အိမ်ကို ပြန်တာနည်းလာတယ်။ “နင့်ဦးငယ်ဝင်စားတဲ့ကလေးကို ခမည်း (ခမဲ) ပေးရမယ်၊ ပြန်လာကြည့်ဦး” လို့ပြောတုန်းက ကျွန်မအရမ်းဝမ်းသာသွားခဲ့တာပါ။ ဘ၀ခြားသွားပေမယ့် ဦးငယ်ကို တစ်ခေါက် ပြန်တွေ့ခွင့်ရဦးမှာကိုး။ အမေက အဲဒီသတင်းပြောတဲ့နေ့ပဲ ကျွန်မအိမ်ကို ချက်ခြင်းပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ၀မ်းသာလွန်းနေတဲ့ ကျွန်မဟာ ကလေးရဲ့ မိဘတွေ ဘယ်သူ၊ ဘယ်ဝါဆိုတာ မသိပါဘူး။ အိမ်ပေါ်ကို လှမ်းအတက်၊ ကလေးကို ဖက်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးကိုအမြင်မှာ ကျွန်မလက်ထဲက ခရီးဆောင်အိတ်လွတ်ကျသွားပါတယ်။ “ဘုရားရေ….မိုးပါလား”
မိုးရဲ့လက်ထဲကနေ ကျွန်မဆီကိုလာချင်လို့ ကော့လန်ထိုးနေတဲ့ကလေးလေးဟာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ကျွန်မမေးဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ သူ့အမေလက်ထဲမှာ တဗြဲဗြဲနဲ့ငိုနေတဲ့ ကလေးဟာ ကျွန်မလက်ထဲကို အရောက်မှာ တိတ်လို့။ မျက်နှာအစိမ်း သက်သက်ဖြစ်နေတဲ့
ကျွန်မကို ပြုံးပြနေတဲ့ သားပုလေးဟာ “ငါတို့ကို ထပ်ပြီး မနှောင့်ယှက်နဲ့နော်”ဆိုပြီး မျက်နှာချိုသွေးနေသလိုပါပဲ။ သားပုလေးနဲ့
ကျွန်မကိုကြည့်ရင်းနဲ့ မိုးလည်းငိုလို့။ကျွန်မအရှုံးပေးလိုက်ပါပြီလေ။အခုတော့ ချစ်ခြင်းရဲ့အဓိပါယ်ကို ကျွန်မနားလည်ခဲ့ပါပြီ။ အချစ်ဆိုတာ ပေါင်းစပ်ခွင့်ရသည်ဖြစ်စေ၊ မပေါင်းစပ်ရသည်ဖြစ်စေ အေးချမ်းစွာစီးဆင်းတတ်တဲ့ မြစ်တစင်းဆိုတာကို ကျွန်မသိခဲ့ပါပြီ။
အဲဒီလိုသိတဲ့အသိနဲ့အတူ ကျွန်မ စတင်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခဲ့မိပါပြီ။ “နင်ချစ်တတ်တဲ့တနေ့ ၀ဋ်လည်လိမ့်မယ်” လို့ အကြိမ်ကြိမ် ပြောခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စကားကိုကျွန်မပြန်ကြားယောင်မိပါတယ်။ ကျွန်မချစ်တဲ့သူနဲ့ ကျွန်မကြားမှာ (အတိတ်တုန်းက ကျွန်မ ဆိုးခဲ့သလို) ကြားဝင်နှောင့်ယှက်မယ့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ထိတ်လန့်နေမိပြီ။ ကျွန်မ မချစ်တတ်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစား ခဲ့ပါတယ်။ “ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းကင်းတဲ့ သူဖြစ်ရပါလို၏” လို့ ဘုရားမှာ အကြိမ်ကြိမ် တောင်းမိခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့ဆုတောင်း ဘယ် အတိုင်းအတာအထိ ပြည့်မလဲဆိုတာကို ကျွန်မမခန့်မှန်းတတ်ပါ။ ကျွန်မ၀ဋ်လည်မှာကို ကြောက်နေမိပါတယ်။ ချစ်တဲ့သူနဲ့ မဆုံ ဆည်းရမှာကို ကြောက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ခင်းတဲ့ အိပ်ရာ၊ ကိုယ်အိပ်ရမယ် မလား။ ကံဇာတ်ဆရာအလိုကျ ကဟေ့ဆိုတဲ့ တနေ့ကျရင်တော့ မနွဲ့စတမ်းဖျော်ဖြေရမယ့် ကျွန်မနှလုံးသားထိတ်လန့်နေရတဲ့ အဖြစ်ဟာ အိပ်မက်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါစေတော့ရှင်။
Filed under: ရေးမိရေးရာ ကဗျာများ — thetsonehnin @ 10:17 AM
ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ ထူးဆန်းတယ်လို့ သိပ်မထင်ကြဘူး။
ပုံတူပွားနိုင်တဲ့ ချစ်ခြင်းဆိုတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသတဲ့။
ကျွန်မဟာ တော်တော်ကို ပိန်းတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်
ကြွေလွယ်၊ နွမ်းလွယ်တဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်…။
Filed under: ရေးမိရေးရာ ကဗျာများ — thetsonehnin @ 10:15 AM
အိပ် မက် က အ စိမ်း သေ
အ နာ ဂတ် က အ စိမ်း သေ
မ ကျွတ် လွတ် နိုင် ရှာ တဲ့ ဝေ ဒ နာ နဲ့ လူ…………။
ထို သို့ သော သေ လူ ဟာ
ည ည ဆို ဂ ယောင် ခြောက် ခြား နဲ့
ကြေ ကွဲ ဖွယ် အ တိတ် ကို
မြိန် ရည် ရှက် ရည် စား သုံး နေ လေ ရဲ့။
ခန္ဓာ စက်ရုံ June 26, 2010
Filed under: ကျန်းမာ သုတ — thetsonehnin @ 5:45 AM
ကျွန်မသာ နေမကောင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ကျွန်မရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ စက်ရုံအကြီးစားတစ်ခုရှိနေတာကို သတိထားမိဦးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီထက်ပိုပြီး တိတိကျကျပြောရရင်တော့ ကျွန်မသာဆေးတွေ မသောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ကျွန်မ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျွန်မပြန်ပြီး လေ့လာခွင့် ရခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အခုတော့ ပိတ်ကားထက်မှာတင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလို မိမိကိုယ်မိမိပြန်မြင်ခွင့်ရခဲ့ပြီ။ ကျွန်မတို့သတိမထား မိဘဲ လည်ပတ်နေတဲ့ အဲဒီစက်ရုံအကြောင်း ကိုပြောမယ်ဆိုရင် ကျွန်မ ဆေးစသောက်ရတဲ့ အကြောင်းက စရပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်မ အချိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်တည်းက အချို၊ သကြားလုံးကို လက်တစ်ကမ်းအကွာမှာ ထားပြီး ပဲလှော်ဝါးသလို ဝါးစားလေ့ရှိပါတယ်။ အချိုစားလို့ လူကြီးတွေက ပလုတ်ကျင်းခိုင်းရင်လည်း ရေကို ခဏလေးငုံပြီး ထွေးထုတ်ပစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကျွန်မဟာ သွားပိုးပေါက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ခုနှစ်တန်းတက် ကတည်းက သွားခဏခဏကိုက်ပါတယ်။ အသားတွေစားရင် အရမ်းသတိထားရပါတယ်။ ဆယ်တန်းတက်တဲ့နှစ်မှာတော့ အဲဒီပိုးစား နေတဲ့သွားကို နှုတ်ပစ်လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း သွားကိုဂရုစိုက်ခဲ့တော့ သွားနာတဲ့ ဝေဒနာနဲ့ အတော်လေးကို ကင်းကွာခဲ့ပါတယ်။ သွားနည်းနည်းနာရင် လေးညှင်းဆီ အစက်ချပေးတာကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ရှေ့အပတ် စနေနေ့ကတော့ သင်တန်းကနေစာသင်ပြီးပြန်အလာ လမ်းမှာ ကျွန်မသွားနည်းနည်းနာလာ ပါတယ်။ အရင် ပိုးပေါက်ရှိတဲ့နေရာအဟောင်းကနေ နာတာလားဆိုတော့ အဲနေရာကလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒီဘက်သွား ကလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ရှာရင်း၊ ရှာရင်းနဲ့ နာနေတဲ့နေရာကို တွေ့ပါပြီ။ နောက်ဆုံး အံသွား။ အခုမှ အံ့ဆုံးပေါက်တာကိုး။ သွားကလည်း အပြင်ကို ထွက်ချင်၊ သွားဖုံးကိုလည်း ခွဲမထွက်နိုင်တော့ တကယ့်ကို အခံရခက်တာပါပဲ။ မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျတဲ့အထိကို နာတာပါပဲ။ နောက်ဆုံးဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့လို့ ညဘက်ကြီးသွားဆေးခန်းကိုပြေး၊ ဆရာဝန်ပေးလိုက်တဲ့ဆေးတွေ သောက်ပြီးမှေးနေတုန်း…
ကျွန်မရဲ့ အမြင်အာရုံဟာ မှောင်အတိကျသွားပါတယ်။ မီးပျက်လို့မှောင်သွားတာနဲ့လည်း မတူဘူး။ သက်သက်မဲ့လုပ်ပြီး အမှောင်ချ လိုက်တာနဲ့တူနေပါတယ်။ ဘာဖြစ်သွားတာပါလိမ့်လို့စဉ်းစားနေတဲ့ ကျွန်မမြင်ကွင်းထဲကို အမှုန်လေး ၃၊ ၄ခု ဝင်လာပါတယ်။ အဲဒီ အစက်အပြောက်လေးတွေဟာ မြင်သာတဲ့အရွယ်အထိတဖြည်းဖြည်း ကြီးလာ တယ်ဆိုရင်ပဲ ဆေးလုံးလေးတွေရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်က ပေါ်လာတယ်။ တစ်ခုက ရှည်ရှည်လေး။ အဲဒါကျွန်မသောက်လိုက်တဲ့ Amoxil? နောက်အရောင်စပ်ထားတာလေးက Analgesic? အဖြူရောင်လေးက Cevit၊ အနီရောင်လေးက Multivita/ ကျွန်မစောစောတုန်းက သောက်လိုက်တဲ့ ဆေးတွေချည်းပဲ။ ဒါဆို ကျွန်မအခုမြင်နေရတာ ကျွန်မရဲ့ လည်ချောင်းပေါ့။
အဲဒီဆေးတွေဟာ သောက်ပြီးပြီးချင်း အစာအိမ်ထဲကို လျှောခနဲ ဝင်သွားမယ်လို့ ကျွန်မက ထင်နေတာ။ ခုတော့ သူတို့က လည်ချောင်းလွန်ရုံကလေးပဲ ရှိသေးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ အစာအိမ်ထဲကို တန်းပြီး ဝင်မသွားတာလဲ ဆိုတာကို ဒုတိယအကြိမ် စဉ်းစားနေမိတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဆေးလုံးလေးရောက်နေတဲ့နေရာက ကြွက်သားက နည်းနည်းလေး ကျုံလိုက်တယ်။ တပြိုင်နက်တည်း သူ့ရှေ့က ကြွက်သားတွေက နည်းနည်းလေးကျယ်ပေးလိုက်တော့ ဆေးလုံးလေးတွေက ရှေ့ကိုရွှေ့သွားတယ်။ ကြွက်သားတွေဟာ နည်းနည်းလေးကျုံလိုက်၊ ဆေးလုံးလေးက အရှေ့ ရောက်သွားလိုက်၊ ကြွက်သားလေးက ပြန်လျော့သွားလိုက်နဲ့။ တဖြည်းဖြည်းချင်းသွားလာလိုက်တာ အခုဆို ဆေးလုံးလေးတွေဟာ အစာအိမ်အဝကိုတောင် ရောက်လာပါပြီ။
အစာအိမ်ထဲကိုရောက်ရင် အက်ဆစ် (Hydrochloric Acid) ထဲမှာ ဆေးလုံးလေးတွေဟာ ပုံပြောင်းသွား တော့မယ်။ ဆပ်ပြာမှုန့်ကိုရေထဲမှာ ထည့်ဖျော်လိုက်သလို ဆေးလုံးလေးတွေ ပျော်သွားမယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်ဟာ တက်တက်စင်အောင ကိုလွဲတာပါပဲရှင်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အစာအိမ်ထဲက အစာချေရည်တွေထဲမှာ ဆေးလုံးလေး တွေဟာ ချက်ခြင်းပျော်မသွားပါဘူး။ သူတို့ဟာ အစာအိမ်တည်ရှိနေတဲ့ အနေအထားအတိုင်း အရှေ့နဲ့ အနောက်ကို လွန်းပျံထိုးနေပါတယ်။
အဲသလိုသွားချည်၊ ပြန်ချည်လုပ်ရင်းနဲ့ ဆေးလုံးလေးတစ်ချို့ရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ ကာထားတဲ့ (Coating) အလွှာ လေးဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါးလာပါတယ်။ အစာချေရည်နဲ့ရောနှောကျေညက်သွားပြီးတော့မှ ပျစ်ချွဲချွဲအရည်တွေအဖြစ် အစာအိမ်ရဲ့ ထွက်ပေါက် Pyloric Valve ကနေ အူသိမ်ဦးပိုင်းကို ရောက်သွားတယ်လေ။ တချို့အယ်ကာလီနဲ့တွေ့မှ ပျော်စေချင်တဲ့ Enteric Coated လုပ်ထားတဲ့ဆေးတချို့ကတော့ ဒီနေရာကိုရောက်မှပဲ ပုံစံပြောင်းသွားတော့တာပဲ။ အဲဒီလို လွတ်လွတ် ကင်းကင်းဖြစ်သွားတဲ့ဆေးလုံးလေးတွေဟာ အူနံရံသွေးကြောကနေကဆင့် Portal Vein ကနေ အသည်းဆီကို ရောက်သွားပါတယ်။
အသည်းမှာ သူတို့ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကို ကျွန်မသိပ်သိချင်တာပဲ။ လူတွေ အသည်း၊ အသည်းနဲ့ တင်စားခေါ် ဝေါ်နေကြတဲ့ အသည်းဆိုတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကြီးကို ကျွန်မအခုတွေ့နေရပါပြီ။ ကျွန်မမျှော်လင့်ထားသလို အသည်းဟာ လှတ၊ ပတ အင်္ဂါလေးမဟုတ်ပေမယ့် သူ့အလုပ်ကိုတော့ သူကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လုပ်နေတာပဲ။ တကယ်တော့ အသည်းဟာ ပင်မစက်ရုံကြီး (Main Plant) ပါပဲ။ အသည်းအလုပ်လုပ်တာကိုကြည့်နေရတာဟာ ဆန်စပါးတွေ ကြိတ်ခွဲတာကို လေ့လာနေရတာနဲ့ တထေရာတည်းပါပဲ။
စပါးကို ဆန်ကြိတ်လိုက်ရင် ထမင်းအနေနဲ့စားသုံးမယ့် ဆန်တွေထွက်လာသလို၊ အပိုပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဆန်ကွဲ၊ ဖွဲနုတွေ၊ ဖွဲကြမ်းတွေ ထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ စောစောက သွေးစီးကြောင်းကနေ ပါလာတဲ့ ဆေးတွေဟာ အသည်းမှာ ဓါတ်ကူပစ္စည်းတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ ကြိတ်ခွဲ၊ ချေဖျက်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ ဆေးတွေဟာ တကယ့် အလုပ်လုပ်မယ့်ဆေး Active Metabolite တွေ၊ စွန့်ထုတ်ပစ်မယ့် ပစ္စည်းတွေအဖြစ် အလျှိုလျှိုပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အလုပ်လုပ်မယ့် Active Metabolite တွေဟာ သွေးစီးကြောင်းရဲ့ အကူအညီနဲ့ပဲ သူတို့ အလုပ်လုပ်မယ့်နေရာကို ထွက်သွားပါတယ်။
အဲသလို ဆေးတွေသွေးထဲမှာ လိုက်ပါလည်ပတ်သွားတာဟာ ကလေးတွေ မုန့်စားကျောင်းလွှတ်ချိန် အပြင်ကို ထွက်လာတာနဲ့တူပါ တယ်။ တစ်ဦးတည်းထွက်လာတဲ့ကလေးတွေရှိသလို တစ်ချို့ကလေးတွေကတော့ တစ်ယောက်ပုခုံး တစ်ယောက်ဖက်ပြီး တစ်ယောက်ထွက်လာကြတာပေါ့။ တချို့ဆေးတွေဟာ တစ်မျိုးတည်းအလွတ် Free Form ပုံစံနဲ့စီးမျောသွားကြသလို၊ တချို့ကတော့ Protein နဲ့ပေါင်းပြီး Boundingပုံစံနဲ့သွားကြပါတယ်။
သူတို့အလုပ်လုပ်ရမယ့်နေရာကိုရောက်တော့မှ ကျွန်မကိုနာကျင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ Chemicalsတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်တော့ တာပါပဲ။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ Chemicals တွေဟာ နည်းသထက်နည်းလာပါတယ်။ ရောင်နေတဲ့ နေရာလေးတွေကလည်း အရောင် ကျလာပါတယ်။ သူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အလွတ်သမားဆေးလေးဟာ မြန်မြန်အလုပ်လုပ်ပြီး မြန်မြန်အာနိသင် ကုန်သွားတာ ကို တွေ့ပါတယ်။ Proteinနဲ့တွဲနေတဲ့ဆေးမှုန်လေးကတော့ ခပ်ဖြေးဖြေးလေးပဲ အလုပ်လုပ်ပြီး မှန်မှန်ပဲပြန်ထွက် သွားပါတယ်။ ဆေးလုံးလေးတွေအလုပ်လုပ်တာကိုမြင်နေရတာ ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံကြီးတစ်ခုထဲကို လေ့လာရေး ရောက်နေ သလိုပါပဲ။ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ စီကာစဉ်ကာ ဖြစ်ပျက်သွားတာဟာ တကယ့်ကို စက်ရုံအတိုင်းပါပဲ။
အလုပ်လုပ်ပြီးရင် တာဝန်ကျေပြီးလို့ထင်ရတဲ့ဆေးတွေဟာ တကယ်တော့ လတ်စမသတ်သေးပါဘူး။ သူတို့တွေ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေ အပြင်ကို ပြန်ထွက်ရဦးမှာကိုး။ အဲဒီလိုပြန်ထွက်ဖို့အတွက် တချို့ကတော့ ကျောက်ကပ်ကို သွေးစီးကြောင်းကနေတဆင့် ပြန်မျောရတယ်။ အသည်းမှာ ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတချို့ကတော့ သည်းချေရည်၊ အဲဒီကနေ အူလမ်းကြောင်းထဲရောက်ပြီး မစင်ထဲကနေ ပြန်ထွက်သွားဖို့ တာစူနေတာကို တွေ့နေရပါတယ်။
ဆေးတွေသွေးစီးကြောင်းထဲမှာ မျောပြီးပါလာတာဟာ မြစ်ပြင်မှာ ဗေဒါတွေမျောနေသလိုပါပဲ။ တချို့ကတော့ ဟိုဘက်သွေးကြော နံရံလေးမှာ ကပ်ကျန်လိုက်၊ ဒီဘက် နံရံမှာကပ်လိုက်နဲ့။ တော်တော်များများကတော့ ကျောက်ကပ်ဆီကို ရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်မတို့အပြင်ကနေ ယပ်တောင်နဲ့တူတယ်၊ ပဲကြီးစေ့နဲ့တူတယ်လို့ ပြောနေကြတဲ့ ကျောက်ကပ်ရဲ့ အတွင်းသဏ္ဍန်ဟာ လျှပ်စစ် ဓါတ်အားခွဲစက်ရုံနဲ့တူတယ်လို့ ပြောရင်ပိုမှန်မလားမသိဘူး။
အထဲမှာ ပြွန်ငယ်ပေါင်းများစွာနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ကျောက်ကပ်ဟာ ပိုက်လိုင်းတွေအများကြီး သွယ်ထားတာနဲ့ကို ပိုပြီးတူနေ ပါတယ်။ အဲဒီက တချို့ပြွန်တွေမှာ အနည်ဖတ်တွေပိတ်နေတာကိုတွေ့ပါတယ်။ အင်း… ကျွန်မ ရေသောက်တာနည်းလို့ ဆီးသွားတာ နည်းပြီး အနည်တွေကပ်ကျန်နေတာပဲ ဖြစ်ရမယ်။ ဒီတစ်ခါ နေကောင်းသွားရင် ရေများများသောက်မယ်၊ အရည်ရွှမ်းတဲ့အသီးတွေ များများစားမှဖြစ်မယ်။ နိုမို့ဆို ကျွန်မရဲ့ပိုက်လိုင်းလေးတွေမှာ ကျောက်တွေဘာတွေတည်သွားရင် ဒုက္ခနော်။
ဟော….ပြွန်ထဲကိုရောက်လာတဲ့ သွေးတွေထဲကနေ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေမယ့် ပစ္စည်းတွေကို ပြွန်လေး တွေက ဖယ်ထုတ်သင့်တာဖယ်ထုတ်၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တာတချို့ကို စုပ်ယူတန်တာ စုပ်ယူတာပေါ့။ စောစောတုန်းက စွန့်ထုတ်မယ့်ဆေးတွေပါတဲ့ သွေးစီးကြောင်းထဲမှာ Glucose, Hormone, Aminoacid တို့လို ပြန်ပြီးပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေပါတော့ သူတို့ကိုသွေးထဲမှာ ပြန်ပြီးပျော်ဝင်စေလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလို အဆင့်ဆင့် ဖြတ်သန်းအနယ်စစ်ပြီးတော့မှ ကျွန်မတို့အတွက် အကျိုးမရှိတဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေဟာ ဆီးအိမ်ထဲကိုရောက်သွားတော့တယ်။
ဆီးအိမ်ထဲကိုရောက်လာရင်လည်း သူတို့ဟာ ရွှတ်ခနဲ ဆိုပြီး အပြင်ကို ထွက်သွားလို့မရပြန်ဘူး။ ဆီးအိမ်ထဲက ကြွက်သားတွေ လိမ်ညှစ်ပြီး တွန်းထုတ်မှသာ ထွက်ရတာ။ အဲလိုထွက်ဖို့ကလည်း ဦးနှောက်ရဲ့ အောက်ခြေက Pituitary Glan ကထွက်တဲ့ Antidiuretic Hormone ဟော်မုန်းကလည်း ထိန်းချုပ်ထားသေးသတဲ့။ အားလုံးအကျိုး အကြောင်းညီညွှတ်ပြီလည်း ဆိုရော..
..အား…ဆီးသွားချင်စိတ်နဲ့အတူ ကျွန်မအိပ်ရာကနေ လန့်နိုးလာတယ်။ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ နံနက် ၅ နာရီ။ ညတုန်းက ကျွန်မဆေးသောက်ပြီးတည်းက အိပ်ပျော်သွားတာကိုး။ နာနေတဲ့သွားကလည်း အတော်ကို သက်သာ သွားပြီ။ ခုန ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မပြန်မြင်ခဲ့တာ အိပ်မက်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့အတွင်းအင်္ဂါတွေ အလုပ်လုပ်နေတာဟာ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ပါ။ ကျွန်မ မျက်စိအောက်မှာ တင်ဖြစ်ပျက်နေတာ။ ညတုန်းက သွားနာလို့ တရားမထိုင်ဖြစ်ခဲ့ ပေမယ့် ကျွန်မ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျွန်မပြန်ရှု့နိုင်ခဲ့ပြီ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီတစ်ခါ သွားနာတာကိုတော့ ကျေးဇူးတင်မိတယ်။ သူ့ကြောင့်သာ မဟုတ်ရင် ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ ကျွန်မရဲ့ အတွင်းစက်ရုံကြီးကို အတော်ကြာကြာ လျစ်လျူရှုမိဦးမယ် ထင်တာပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… သွားလေးရယ်။